Wufuud Ku Qul Quleysa Dhuusamareeb & Loolan Adag Oo Ka Socda - Awdinle Online
Wufuud Ku Qul Quleysa Dhuusamareeb & Loolan Adag Oo Ka Socda
January 14, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Dowlad goboledka Galmudug waxaa buux dhaafiyey Boqolaal isugu jira mas’uuliyiin iyo xil doonayaan maadaama halkaasi ay ka socdaan howlo doorashooyin ah.
Todobaadkaan gudihiisa waxaa Magaalada Dhuusamareeb gaarey xubno kala duwan,kuwaas oo qaarkood ay yihiin musharixiin Madaxweynenimo iyo tan guddoonka Baarlamaanka Galmudug.
Loolan adag ayaa ka jira Magaalada dhuusamareeb,waxaana kan ugu adag uu yahay laguna tijaabinayo awoodaha isku haya Galmudug doorashada guddoomiyaha Baarlamaanka oo ilaa iyo hadda ay isku soo taageen Saddex musharax oo laba kamid ah ay kasoo jeedaan deegaanka Ceeldheer iyo mid kasoo jeeda degmada Galhareeri ee Gobolka Galgaduud.
Wararka aan ka heleyno magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay halkaasi uga dhaceen kulamo gooni gooni ah oo ay yeelanayen musharixiinta guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaannada Cusub ee Galmudug.
Wariyeyaasha ka howlgalla Magaalada Dhuusamareeb qaarkood ayaa waxaa ay sheegeen in magaalada ay ka duwan tahay sidii hore,isla markaana qof walba uu loolan ugu jro sidii uu xil uga heli lahaa Galmudugta Cusub ee dhismaheeda uu ka socdo Magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleDP World oo dacwadda kaga guuleysatay Jabuuti & Qorshe cusub oo la wado
Next articleWho’s Oman’s New Sultan Haitham bin Tariq?